ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းဖို့အတွက်ကတော့…ပညာမတတ်စာမဖတ်ပေမတတ် ပြောသမျှဟောသမျှယုံပြီး ခိုင်းသမျှလုပ်တဲ့ ကျွန်စိတ်ကရှိရအုံးမယ်….သိပ်တော့မလွယ်ဖူးကွ… | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« တစ်လ နီးပါး ကြာအောင် ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ အလွတ်သတင်းထောက် ကိုပါကြီးကို တပ်မတော်က ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းထားစဉ် အစောင့် စစ်သားဆီက လက်နက်ကို လုယူ ထွက်ပြေးဖို့ ကြိုးစားလို့ ပစ်ခတ် ဖမ်းဆီးရာမှာ သေနတ်ဒဏ်ရာနဲ့ အသေ ဖမ်းဆီးမိခဲ့ကြောင်း
Justice for reporter Ko Par Gyi murdered by Myanmar Military »
ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းဖို့အတွက်ကတော့…ပညာမတတ်စာမဖတ်ပေမတတ် ပြောသမျှဟောသမျှယုံပြီး ခိုင်းသမျှလုပ်တဲ့ ကျွန်စိတ်ကရှိရအုံးမယ်….သိပ်တော့မလွယ်ဖူးကွ…
“ပေါတယ်ဆိုတာ ပါရမီရှိမှ ပေါလို့ရတာ”
“လိမ်တယ်ဆိုတာ မျက်နှာပြောင်မှ လိမ်လို့ရတာ”
“မိုက်တယ်ဆိုတာလဲ ဇ ရှိမှ မိုက်လို့ရတာ”
“အဲ…….ယုတ်မာရိုင်းစိုင်းဖို့အတွက်ကတော့………… ပါရမီလဲရှိရမယ် မျက်နှာလဲပြောင်ရမယ် ဇလည်းရှိရမယ် အသိဥာဏ်လဲ နိမ့်ကျရမယ် မျိုးရိုးစဉ်ဆက်လဲ အောက်တန်းကျရမယ် မိမဆုံးမ ဖမဆုံးမလဲဖြစ်ရမယ် ဘာသာသာသနာအဆုံးအမလဲ လက်မခံနားမလည်သူဖြစ်ရမယ် မနာလိုဝန်တိုတတ်ပြီး ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်ရှိသူလဲ ဖြစ်ရမယ်…ပညာမတတ်စာမဖတ်ပေမတတ် ပြောသမျှဟောသမျှယုံပြီး ခိုင်းသမျှလုပ်တဲ့ ကျွန်စိတ်ကရှိရအုံးမယ်….သိပ်တော့မလွယ်ဖူးကွ……….”
This entry was posted on October 26, 2014 at 8:05 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.